Ndeupi Mutengo wekuwana kana Kuchengetedza Mutengi? | Martech Zone
Ndeupi Mutengo wekuwana kana Kuchengetedza Mutengi?
Chitatu, Kurume 9, 2016 Douglas Karr
Kune humwe huchenjeri huripo hwekuti iyo mutengo wekuwana mutengi mutsva inogona kuva kanomwe kusvika ku4 nguva iyo mutengo wekuchengetedza Poshi. ndinoti huchenjeri hunokunda nekuti ini ndinoona iyo nhamba inowanzo govaniswa asi haimbo nyatso kuwana sosi yekuenda nayo. Ini handisi kukahadzika kuti kuchengeta mutengi hakuna kudhura pasangano, asi pane zvisizvo. Mune bhizimusi rebazi, semuenzaniso, unogona kazhinji tengesa - mutengi anosiya anotsiviwa neimwe inobatsira. Mune ino kesi, kuchengeta mutengi Aizoita tora yako bhizinesi mari nekufamba kwenguva.
Zvisinei, maverengero mazhinji haachisiri echinyakare nekuda kwekukanganisa kwevatengi pane edu ekushambadzira. Zvemagariro midhiya, zvipupuriro zvepamhepo, nzvimbo dzekuongorora, uye injini dzekutsvaga zvinopa zvinoshamisa kutumira mota kune vatengi vatsva. Kana makambani auri kushanda nawo akaguta, ivo vanowanzo govana izvozvo ne network yavo kana kune mamwe mawebhusaiti. Izvi zvinoreva kuti kuchengetwa kwakashata mazuva ano kuchakanganisa nzira yako yekutora!
Kuwana maringe neKuchengetedza Mafomura (pagore)
Mutengi Kukwezva Rate = (Nhamba yeVatengi vanosiya gore rega rega / (Hwerengedzo yeVatengi)
Mutengo Wekuchengetedza Kwevatengi = (Yakazara Nhamba yeVatengi - Nhamba yeVatengi vanosiya Gore Roga Roga) / (Hwerengedzo yeVatengi)
Mutengi Hupenyu Hwose Kukosha (CLV) = (Yese purofiti) / (Mutengo Wevatengi Wekutengesa)
Mutengi Kuwana Mutengo (CAC) = (Yakazara Yekutengesa uye Yekutengesa Budget Inosanganisira Mishahara) / (Nhamba yeVatengi Yakawanikwa)
Mutengo weKutorwa = (Mutengi Hupenyu Hwose Kukosha) * (Nhamba Yegore Negore Vatengi Vakarasika)
Kune vanhu vasati vamboita izvi kuverenga, ngatitarisei pamhedzisiro yacho. Kambani yako ine zviuru zvishanu zvevatengi, inorasikirwa ne5,000 yavo gore rega, uye yega inobhadhara $ 500 pamwedzi yebasa rako nemari yemubhadharo ye99%.
Mutengi Kutariswa Rate = 500/5000 = 10%
Mutengo Wechengetedzo yeVatengi = (5000 - 500) / 5000 = 90%
Mutengi Hupenyu Hwose Kukosha = ($ 99 * 12 * 15%) / 10% = $ 1,782.00
Kana yako CAC iri $ 20 pamutengi, yakasimba dzoka pakushambadzira mari, kushandisa $ 10k kutsiva vatengi mazana mashanu vakasara. Asi ko kana iwe ukakwanisa kuwedzera kuchengetedza 500% nekushandisa imwe $ 1 pamutengi? Iyo ingave iri $ 5 yakashandiswa pachirongwa chekuchengetedza. Izvi zvinowedzera CLV yako kubva pa $ 25,000 kusvika pa $ 1,782. Pamusoro pehupenyu hwevatengi vako zviuru zvishanu, iwe uchangobva kuwedzera yako yepasi mutsara neinenge miriyoni yemadhora.
Muchokwadi, iyo 5% inowedzera mumutengi # yekucheresa mwero inowedzera purofiti ne25% kusvika 95%
Nehurombo, maererano ne data rakatorwa pane izvi infographic kubva kuInvesp, 44% emakambani ane tarisiro huru pa #kuwana nepo chete 18% inotarisa pa # retention. Mabhizinesi anofanirwa kuziva kuti zvemukati uye zvemagariro marongero zvinowanzo kupa kukosha kwakawanda munzira yekuchengetedza kupfuura zvavanoita nekutora.
Tags: kutora maringe nekudzokororaMutengo weKutorwamutengi kutora mutengovatengi kuwana pamwe nekuchengetedzaMutengi Kukwezva Ratemutengi hupenyu hwakawandakuchengetwa kwevatengimutero wekuchengetedza vatengiinfographicinvesp
Compass: Tsvaga Maitiro Anotyaira Kwevatengi Kuchengetwa
Vanopfuura makumi maviri kubva muzana eImba Redu Peji Mabhatani Anouya kubva kuChimwe Chinhu
Mar 10, 2016 pa 1: 13 AM
Ndihwo chaihwo ruzivo rwandanga ndichitsvaga. Ndatenda nekugovana hunyanzvi hwako!
Mar 15, 2016 pa 12: 12 PM
Ndinoonga kuti ndaverenga chinyorwa chenyu. Izvi zvinokanganisa sarudzo dzangu dzemberi mune rangu bhizinesi. Isu tinonyatsoda kutarisira avo vakavimbika kwatiri.